Shiinaha warshadda xamuul qaada 42 mitir iyo alaabada iibiya | Changyuan
waxaan nahay soosaarista mashiinada dhismaha caan ah, dhoofinta mashiinada waxsoosaarka xirfadeed iyo hal bixiye xalka xamuulka Shiinaha, kooxdeena waxay khibrad kabadan 15 sano u leeyihiin garoonkan horeyba.
(1) Dammaanadda: Alaab kasta oo la soo saaraa waa inay ku raaxaysataa halsano / 2000 saacad damaanad shaqeed, muddadaas oo aan ku hagaajin doonno ama aan ku beddelayno qaybaha cillad la'aanta ah oo bilaash ah haddii cillada ama hannaanka cilladaha ay dhacaan oo alaabada dheellitirka ahi ay ku sugan yihiin xaaladdii caadiga ahayd ee shaqada.
(2) Qeybaha tafaariiqda: Shirkadeena waxaa ka go'an inay u siiso macaamiisheenna alaabada dhabta ah ee tayo leh tayada ugu sareysa, taam ahaanshaha saxda ah iyo shaqada ku habboon. Qaybtaada kuu gaarka ah ayaa annaga na weyddiista, oo waxaad soo taxdaa magaca wax soo saarka, sharaxaadda qaybaha loo baahan yahay. Waxaan dammaanad ka qaadaynaa in dalabkaaga si dhaqso leh oo ku habboon loo maareeyo.
(3) Rakibaadda & Dayactirka: Shirkaddeenna ayaa awood u leh inay bixiso guud ahaan rakibidda mashiinnada qalafsan, oo kuu oggolaanaya inaad bilowdo hawsha caadiga ah ee xallinta mashiinnada dhismaha. Kadib marka la rakibo, waxaan samayn doonnaa kormeerka mashiinka oo dhan, qalabka ku shaqeynaya, oo waxaan bixinnaa adiga oo tijaabinaya warbixinnada xogta la xiriira rakibaadda iyo hawlgalka.
(4) Tababbarka: Shirkaddayadu waxay bixisaa tas-hiilaad wanaagsan iyo jawi raaxo leh waxayna adeegyo tababar siin karaan adeegsadayaasha kaladuwan. Kalfadhiyada tababarka waxaa ka mid ah tababarka badeecada, tababarka howlgalka, aqoonta dayactirka, tababbarka farsamada, heerarka, sharciyada iyo tababarka xeerarka iyo tababarka kale, kuwaas oo dhammaantood loogu talagalay inay fuliyaan baahiyahaaga shaqsiyeed. Barnaamijyada tababarka waxaa lagu sameyn karaa gudaha warshadeena, ama goobta macmiilka.
(5) La-talin Farsamo: Shirkaddeena waxay sidoo kale ka caawin kartaa macaamiisha inay la xiriiraan shaqaalaha adeegga tababaran waxayna ku siin karaan aqoon faahfaahsan oo ballaaran. Iyada oo loo marayo talooyinkayaga farsamada, nolosha mashiinkaaga si weyn ayaa loo dheereyn karaa loona sii wadi karaa awoodda sare.
anaga oo ah bixiye xirfadle ah oo ka shaqeeya hal mishiin oo joogsi ah, had iyo jeer waxaan ilaalinaa falsafadda adeegga. waxqabadka iyo qiimaha wanaagsan.
Moodel ： NJ5251THB42 Halbeega Farsamada Moodel ： NJ5251THB42 Halbeega Farsamada
Cabbirrada Mashiinnada dhererka buuxa 11350mm Soo saarista nidaamka cabirka
Barakaca la taaban karo ee la taaban karo Cadaadis hooseeya 140m3/ h
Awoodda soosaarka / xawaaraha 199 / 243Kw / 2100RPM Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 230/260 / 1600mm
Heerarka Emission Wadan V Barokaca matoorka saliida 190 / 260ml / r
Dhumuc toosan 40.1m Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
Dhererka toosan siman 36m Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Qoto dheer oo toosan 23.6m Isku-darka sibidhka 160-220mm
Gacanta koowaad dherer 8850mm Mugga haanta saliida 500L
Gacanta labaad dherer 6700mm Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
Gacanta saddexaad dherer 6500mm Habka nadiifinta biibiile Dhaq
Gacanta afaraad dherer 7100mm Summadaha Qalabka wareejinta kiiska Jarmalka Spor / Zhejiang
Gacanta shanaad dherer 7100mm Bamka bullaacadda Jarmalka Rexroth
Turndabler-otation-xagal ± 360 o Fallaadhiisu badanyihiin Harvey, Jarmalka
Masaafada-dheer-hore-iyo-lugaha gadaal 6800mm Sheet bir ah Waxaa laga keenay Sweden / Baosteel
Hore: 38 mitir oo laba jibaaran buundada buundada
Xiga: Gaari 47meter ah